WFP Yokumbira Mari Inosvika Mamiriyoni Mazana Maviri neMakumi Maviri Yekubatsira Zimbabwe
Kurume 16, 2016
Sangano rinobatsira nechikafu pasi rose rinoti riri kuda mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri emadhora kuitira kuti ribatsire vanhu vari kuziya nenzara muZimbabwe.
Sangano re World Food Programme, WFP, rinoti riri kuda mari iyi kusvika muna Kurume 2017.
Hurumende inoti vanhu mamiriyoni mana vanoda rubatsiro rwechikafu kumaruwa. Asi mutauriri weWFP kuchamhembe kweAfrica, VaDavid Orr, vaudza Studio 7 kuti ivo vachiri kushanda nevanhu mamiriyoni matatu sezvo vasati vaita ongororo itsva yekuona kuti huwandu uhu hwawedzera here kana kuti kwete.
Asi VaOrr vatenda havo kuti nenyaya yemhepo ye eE Nino iri kuvhiringidza kunaya kwemvura, vanotarisira kuti huwandu hwevanoda chikafu huchakura.
Mumwedzi uno chete, WFP inoti iri kubatsira vanhu zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu asi mukutanga kwegore rinouya inotarisira kuti huwandu uhu hunenge hwasvika pamamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri 2,2 million.
WFP iri kutendawo Canada, Switzerland, United Nations Central Emergency Response Fund neAmerica mukubatsira nemari kusvika pari zvino. Mumwe mugari wekuBuhera South, VaTendai Dzawira vanoti munzvimbo yavo vari kupihwa chikafu asi murikuitwa zvematongerwo enyika.
Hurukuro naVaTendai Dzawira